Nwoke Nwere Ike Ikuku? Ka Robtic Ifufe turbine na-akpaghasị ụlọ ọrụ mmanụ - Kimroy Bailey Group
General News, Renewable Energy
Ọhụụ Ahụ Ike Anyị
Nwere ike ịnwe ikuku? Nwere ike ịzụta ya? Ọ na-akụ naanị na mba họrọ? Ifufe a na-edozi naanị Njikọ Njikọ Arab Arab? Dabere na Informationtù Na-ahụ Maka Ozi Ike, mba iri bụ United States, Saudi Arabia, Russia na Canada na-emepụta pasent 69 nke mmanụ ụwa. Mana n'adịghị ka mmanụ ikuku & ikuku gas ike anaghị egbochi ya ịnọ otu ebe ma ọ bụ otu mba. Ifufe fepụrụ na akuku anọ n'akụkụ ụwa niile.
Imepụta na imepụta bụ azụmkpụ nke mmepe obodo na teknụzụ ikuku bụ onye na - agbanwe egwuregwu ugbu a, nwee ike ịhazi ọkwa egwuregwu n'etiti mba ndị na - emepụta ihe. Daalụ! na mba ndị gụpụtara onwe ha wee hapụ imepụtara na Germany, United States of America, Japan ma ọ bụ nke a na-akpọ China na-emepụta ihe, teknụzụ ọhụrụ sitere na KB Group ugbu a pụtara na mmepụta dị ala nwere ike ime ebe ọ bụla n'oge ọ bụla. N’ikwu ya n’ụzọ dị mfe, imepụta ihe chọrọ ume, na iji teknụzụ ikuku ikuku anyị na-eme n’ihu, anyị na-enye ike n’ime oke oke ọhịa dị n’ime.
Kedukwa ihe nke a pụtara gị, mba na-emepe emepe, obere onye ọrụ ugbo, onye nwe ụlọ na-enweta ego na-azụta ya na ụfọdụ echiche azụmaahịa.
Inwe ike imeputa putara na inwere ire ma nwe ire ere putara na inwere ike irite na inwere ike inweta ihe mere anyi obi uto, obi uto. Anyị achọghịkwa ka ị rụta ego n'otu aka ma mefuo ya na mbubata mmanụ ma ọ bụ ike ike dị oke ọnụ. Anyị chọrọ ka ị kpata ma hapụ ihe nketa ụmụ gị! Iji usoro anyị nwere ike ịmegharị mmezi ị nwere ike ịbelata oke gị na ọ bụghị naanị na-asọmpi mana na-aba uru, nke na-erite uru nke ukwuu. Wepụta oge iji lelee ọhụụ anyị nke Global, nke a bụ onye anyị bụ, nke a bụ ihe anyị guzobere. Anyị hụrụ Saudi Arabia, Russia, China na '' Refeyim '' niile ike na mmepụta ọnọdụ taa mana anyị nwere mmasị n'ịgbasa mgwakota agwa ma kwe ka nkezi Joe gbasaa nkata ya. Ahhh, Dị ka ọ dị n’elu-igwe, otu a ka ọ ga-adị n’ụwa.
Otu Kimroy Bailey Group ewepụtala teknụzụ ikuku na - efe efe nke nwere ike ime ka ikuku banye na ikuku elektrọnik ma ọ bụrụ na mpaghara oke ikuku. Teknụzụ a na-enye ohere karịrị 38% nke mpaghara ikuku dị ala n'ofe ụwa na ikuku ọsọ dị oke ala iji mepụta ike zuru oke iji gosi ugbu a itinye ego na teknụzụ ikuku.
Ebumnuche nke ikuku anyị na - efe efe bụ iji mee ka obere ikuku ikuku mega-mega nwee ike ị nweta ike dị ukwuu ọbụlagodi na oke ikuku. Nke a mepere ọnụ ọgụgụ nke ala ikuku, ala, ógbè, agbata na mpaghara ndị anyị nwere ike iji rụọ ọrụ ikuku anyị iji nweta ike. Enwetara anyị ntụpọ?
Gini mere anyi ji eche banyere ike? - Ikwu Elele.
Anyị bụ ụlọ ọrụ ngwakọ nke na - eji ike nrụpụta ike (Solar & Wind) na Robotics, Artificial Intelligence, and technology sensọ. Anyị bụ ndị na-echepụta ihe na ndị na-emepụta onwe anyị na ọtụtụ ngwaahịa ugbu a n'ahịa, n'okpuru nche anwụ nke ụlọ ọrụ anyị. Mgbe ị na-a productsụ ngwaahịa sitere na nyocha na mmepe, imewe, prototype, nnwale Beta, gafere Mass Production ị ga-eche oke ego mmemme eletrik. A sị na ọ bụghị maka mmegharị ume ike a na-emegharị agbakwunye na usoro azụmaahịa anyị, ọtụtụ n'ime ngwaahịa anyị ga-anọrịrị dịka echiche, anyị onwe anyị ga-adaba na ụgwọ ọkụ eletrik na-abawanye.
Dịka onye nrụpụta na-eji teknụzụ dijitalụ n'ime oghere Renewable Energy na Robotics, anyị maara nsogbu nke ndị nrụpụta ndị ọzọ na-eche ihu - anyị nwere ike ikwu maka ụlọ ahịa. Ozugbo ị na-emepụta ikike dị elu, ọnụ ahịa ike na-abụ nnukwu nchegbu ngwa ngwa. Ndị na-emepụta ụlọ ọrụ ọ bụla na ụlọ ọrụ ọ bụla ga-agwa gị na imepụta ahịa na imebi ngwaahịa, ngwongwo & ọrụ ma na-ebuga ya n'ụwa niile, chọrọ ume, ike niile.
Yabụ kedu ihe kpatara ike ọrụ ka bụrụkwa Dinosaur ma e jiri ya tụnyere usoro niile a na-eme na Tech Tech?
Ihe omuma ahia nke ndi Refeyim mmanu bu naani ire mmanu ma ghara idi otua; ọ dịghị mkpa mepụtaghachi, onweghị mkpa iji rụpụtagharị. Ihe edere bu na, kwa afo n’ebuputa ihe nchoputa n’egosiputa oge onodu mmanu nke uwa n’ile, ndi ulo oru ndi a huru ihe ngosi a ka otu ala ha mechiri. Azịza ya adịla n’ihu ha, Chineke kere ma ikuku ma anyanwụ n’ụbọchị mbụ e kere eke, ihe ndị ae kere eke ga-anọnyere anyị mgbe niile. N'oge ya, anyị jiri akụ nke Eluigwe maka ịkwalite ụdị mmadụ niile, ọ bụghị naanị ndị bara ọgaranya. Mgbe ọnụọgụ 10 na-enye 70% nke mmanụ ụwa mgbe ahụ ha na-ejide akara aka nke mba 185 ndị ​​ọzọ dị n'aka. Ha nwere ike ịtọ ọnụahịa, na-ejikwa ahịa na ịkọwa ahịa. Yabụ kedu ihe ọhụụ, gịnị kpatara mgbanwe, kedu ihe kpatara?
Otu Kimroy Bailey Group biara ebea ka ekpughari banyere mgbanwe a, ebum n’uche anyi bu ime ka anyi hu na onu ahia nke ndi n’enweghi ike. Ulo oru nke ugbo ala nke ugbua nwere ihe eji eme onu ahia nke ihe ichoro di iche iche ma ha emeela ochie, uzo eji eme oku. Anyị na-ekere òkè dị ukwuu n'ịgbakwunye nhọrọ ndị dịnụ maka ike eletrik - nke na-abụghị mmanụ & gas.
Ọ bụ nke a mere anyị ji wuo ụlọ ọrụ anyị n'akụkụ abụọ nke Renewable Energy na Robotics. Ogwe aka nke otu ndi otu anyi, Renewable Energy na Robotics na-arụ ọrụ na aka iji wee mebie mpaghara ume mmanụ ochie nke etinyere na mmanụ kemgbe mgbanwe nke ulo ọrụ na 1760s wee dọrọ ya banye na narị afọ nke 21. Ma maa ihe? Nke a abụghị ọhụụ afọ 20, nke a bụ taa, nke a bụ UGBUA!
Anyị kwenyere na e nweela ụzọ ọrụ ga na-aga n'ihu na arụ ọrụ ike iji belata ọnụahịa eletrik. Mana odighi ngwa ngwa. Ihu ikuku dị ka ndị ọkwọ ụgbọ mmiri chepụtara na 1600s na narị afọ anọ gafere, ọtụtụ ihe agbanwebeghị. Anyị chọrọ ọhụụ buru ibu, chee maka ụgbọ mmiri ọkụ, ụgbọ elu, mba niile na-akwado naanị site na teknụzụ ikuku anyị na anyanwụ. Otu Kimroy Bailey Group biara ebe a ka o bughi ime ngwa ngwa nke ulo oru mmeghari ohuru kama o bu n’uche ndi n’ere ahia ike iru ya. Ngwaahịa anyị kachasị ọhụrụ nke ikuku na-efe efe agaghị eme ka ụlọ ọrụ ikuku dị na-agbanwegharị kama ọ na-ewepụ ihe mgbochi na ntinye maka ndị na-emepụta na ndị nwe ụlọ iji banye n'ụgbọ ma nwee ike na ikuku.
07Ka Nwere ike 7, 2012
Mba iri kacha elu 'Robotic'JapanTop 10 Ebe ị ga-eme nyocha maka nkahịeTop 10 Ngwa nke RobotsCrime na SecurityHouse WorkEn10Human GỤKWUO
Blackout Blackout! 100% Emegharia ohuru bu ihe kwesiri ntukwasi obi
Na Satọde Mach 30 karịrị 90% nke ndị ahịa 600,000 nke icalọ Ọrụ Ọha na Jamaica diri ọtụtụ awa… GỤKWUO
Ifufe ikuku na - ebugharị obodo niile!
Mgbe m nọ na mahadum na-amụ Igwe Ọdụdọ na Kọmputa Kọmpụta, ahụrụ m okwu TED site n'aka nwa agbọghọ Malawi na-eto eto ... GỤKWUO
Njem a na Seattle
Jamaica, Miami, New York, Seattle ... threebọchị mbata nke ọpụpụ, ndị njikọ na mgbanwe ihu igwe riri ụbọchị atọ. M ga ... GỤKWUO
Inye ego na Ugbo Ihu
Ego a ga-enweta site na oru LNG nke na-adịbeghị anya, nke a na-atụ anya na ọ ga-efu ihe karịrị $ 602 nde nwere ike ịhazi ọzọ ... GỤKWUO
Oge ihe omumu ihe omumu nke KB Foundation
Otu Kimroy Bailey Foundation mere ọgbakọ izizi a ga - eme mmeghari ohuru maka ike mmụta ihe banyere ọgbakọ 100% Renewable Community… GỤKWUO
Institutelọ ọrụ nke Injin na Eletrọniki Injinia (IEEE) Power and Energy Society kwadoro otu n'ime Mmegharị na ndị… GỤKWUO